किन व्यर्थ चिन्ता गर्छौ ? कोदेखि व्यर्थै डराउदछौ ? तिमीलाई कसले मार्छ ? - Rastriya Samachar
आइतवार, १२ जेठ २०७६ ८:४४
किन व्यर्थ चिन्ता गर्छौ ? कोदेखि व्यर्थै डराउदछौ ? तिमीलाई कसले मार्छ ?आत्मा न जन्म लिन्छ न मर्छ ।जे भयो, त्यो राम्रो भयो । जे हुँदैछ, त्यो राम्रै हुँदैछ । जे हुनेछ, त्यो पनि राम्रै हुनेछ ।तिमी भूतकालको पश्चताप नगर, भविष्यको पनि चिन्ता नगर । वर्तमान चलिरहेको छ ।तिम्रो के गएको छ र तिमी रुन्छौ ? तिमीले के लिएर आएका थियौ र तिमीले हरायौ ?तिमीले के पैदा गरेका थियौ र नाश भयो ?तिमीले केही लिएर आएका थिएनौ । जे पायौ, यहीँबाट पायौ । जति दियौ, यहीं नै दियौ । खालि हात आएका थियौ, खालि हात नै गयौ, जे आज तिम्रो छ,त्यो हिजो अरु कसैको थियो, भोलि अरु कसैको हुनेछ ।तिमी यसलाई आफ्नो सम्झेर मग्न भैरहेका छौ । यहीं खुसी नै तिम्रो दुःखको मूल कारण हो ।परिवर्तन संसारको नियम हो । जसलाई तिमी मृत्यु सम्झन्छौ, त्यही जीवन हो ।एक क्षणमै तिमी करोडपति बन्दछौ, दोश्रो क्षणमा तिमी दरिद्र बन्दछौ ।मेरो, तिम्रो, सानो, ठूलो, आफ्नो, अर्काको भन्ने मनबाट हटाइदेऊ, अनि सबै तिम्रो हो, तिमी सबैका हौ । तिमी आफू आफै भगवानमा अर्पित हौ ।यही नै सबभन्दा ठूलो सहारा हो ।जसले ईश्वरको सहारालाई जान्दछ, त्यो डर, चिन्ता, शोकबाट सधैंका लागि मुक्त हुन्छ ।मान्छे जन्मिन्छ केहि समय यहि रहन्छ र मर्छ।त्यसैले तिमी आसक्ती रहित भएर काम गर जसले गर्दा तिमी बन्धन बाट मुक्त हुनेछौ।तिमीले जे गर्दछौ, त्यो भगवानलाई अर्पण गर्दै जाऊ।यसो गर्नाले तिमीले सधैंभरि जीवन मुक्त भएको आनन्द अनुभव गर्नेछौ ।
“हे गुरु! हे आचार्य ! हजुरको बुद्धिमान शिष्री द्रुपदको छोराले ब्यबस्थित गरेको पाण्डवहरुको विशाल सैन्यशक्तिलाई एक पटक हेर्नुहोस।
मेरा सैनिकहरुमा सदा-सर्वदा विजयी हुने – हजुर स्वयं , भीष्म, कर्ण, कृपाचाॠ, आश्वत्थामा, विकर्ण र सोमदत्तका छोरा भुरिश्रवा आदि हुनुहुन्छ ।
हाम्रो शक्ति नाप्न नसकिने छ र हामी पुर्णरुपमा भीष्म – पितामहद्वारा संरक्षित छौँ भने भीमद्वारा सावधानीपुर्वक संरक्षित पाण्डवहरुको शक्ति सीमित छ।
तपाईँहरु सबैले यो सैन्यव्युहमा आफ्नो ठाउँ वा मोर्चामा रहेर सबैतिरबाट पितामह भीष्मलाई सहयता पुर्याउनुपर्दछ।”
सञ्जय उवाच – हे भरतवंशी राजन ! अर्जुनद्वारा यसरी सम्बोधन गरिएका भगवान कृष्ण ले अर्जुन चडेको त्यो उत्तम रथ दुबै पक्षका सैनिकहरुका बीचमा लगेर अड्याउनुभयो।
हे गोबिन्द! जसका लागि हामीलाई राज्य , भोग र सुखहरु चाहिएको हो तिनिहरु नै आफ्नो प्राण र धनको आशा मारेर लडाइँ गर्न युद्धभुमिमा उभिएका छन् भने त्यो राज्य , त्यो भोग र त्यो जीवन समेतले हामीलाई के लाभ भयो? त्यसैले हे मधुसूदन ! मलाई विजय पनि चाहिएन , राज्री र सुख पनि चाहिएन। गुरुहरु , हजुरबाहरु , बुबाहरु , छोराहरु , नातिहरु , मामाहरु , साला – जेठानहरु , ससुराहरु र अन्य सम्बन्धीजनहरु साराका सारा युद्ध गर्न मेरा अगाडि उभिएका छन् । पृथ्वीको राज्यको के कुरा स्वर्ग , मर्त्य , र पाताल यी तिनै लोकको राज्य पाए पनि म यिनीहरुलाई मार्न चाहन्न। यिनीहरुले नै मलाई मार्दछन् भने मारुन । यी धृतराष्ट्रका छोराहरुलाई मारेर हामीलाई के आनन्द होला र ?
मेरा इन्द्रियहरुलाई सुकाउने यो शोक हटाउने कुनै उपाय म देख्दिन । स्वर्गमा देवताहरु जस्तै यो पृथ्विमा संसारभरिको निष्कण्टक र धन – धान्यपूर्ण राज्री पाए पनि म यो शोकलाई हटाउन सक्दिन।
यति भनेपछी शत्रुहरुलाई दमन गर्ने अर्जुनले कृष्णसँग ” गोविन्द ! म लडाइँ गर्दिन ” भने र चुप लागेर बसे।
तिमी कुरा विद्वानका जस्ता गर्छौ तर जसका लागि शोक गर्नु आवश्यक नै छैन त्यसैका लागि शोक गरिरहेछौ।पण्डितजनहरु न जिउँदाका लागि शोक गर्दछन् न मरेकाका लागि नै शोक गर्दछन् ।
जसरी यो शरीरधारी आत्मा निरन्तर बाल्यावस्थाबाट युवावस्थामा र युवावस्थाबाट वृद्धावस्थातिर परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसैगरी यो आत्मा एउटा शरीरको मृत्युपछी अर्को शरीरमा स्थानान्तरित हुने गर्दछ।यश किसिमको परिवर्तनलाई देखेर धीर पुरुषहरू मोहित हुदैनन् ।
असत् वस्तुको कुनै चिरस्थायित्व छैन र सत् वस्तुको कुनै परिवर्तन नै हुँदैन । आत्मा र शरीरयी दुवैका प्रकृतिको अध्ययन गरेर तत्वदर्शीहरुले यस्तो निष्कर्ष निकाले।
अविनाशी , अपरिमेय र शाश्वत जीवात्माको भौतिक शरीर नाशवान छ, त्यसैले हे भरतवंशी अर्जुन तिमी युद्ध गर।
जसले यो जीवात्मालाई मार्ने ठान्दछ र जसले यसलाई मर्नेवाला ठान्दछ, ती दुबै अज्ञानी हुन् ।यो आत्मा न मर्दछ न मारिन्छ।
आत्माका लागि न कहिल्यै जन्म छ न मृत्युु ।आत्मा कहिल्यै जन्मिएन, जन्मिदैन र जन्मिनेछैन । ऊ अजन्मा छ, नित्री छ, शाश्वत छ, र पुरातन छ।शरीर मर्दा पनि ऊ मर्दैन।
यदि तिमिले आत्मालाई सधैं जन्मिइरहने र सधैं मरिरहने ठान्छौ भने पनि हे महाबाहु ! तिमीले यसका लागि शोक गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन।
हे कुन्तीपुत्र ! यदि युद्धमा मारियौ भने तिमीले स्वर्गलोक पाउने छौ र यदि युद्ध नै तिमीले जित्यौ भने पृथ्वीको राज्री भोग्न पाउने छौ। त्यसैले तिमी दृढ सङ्कल्पका साथ उठ र युद्ध गर।
यो आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवनको मार्ग हो जसलाई प्राप्त गरेपछी मानिस मोहित हुँदैन ।हे अर्जुन ! जीवनको अन्तिम अवस्थामा पनि यस्तो स्थितिमा पुग्ने मानिस भगवानको धाममा प्रवेश गर्नसक्दछ। – नागरिकबाट